Waa maxay iyo sida loo sameeyo fanzine | Hal-abuurka khadka tooska ah
Iris Gamen | 05/04/2022 21:00 | Dhiirrigelinta
waqti ka hor, marka uusan jirin internet, warka waxaa la ogaan jiray oo kaliya haddii aad akhrido jaraa'idka ama joornaalada. Maqaallada la midka ah kuwa aad akhrinayso waxay ahaayeen kuwo iskood u daabacay, daabacan, nuqul ka sameysan, oo gacanta loo gudbiyo. Ma jirin internet laakiin waxaa jiray fanzines.
Hadaadan wali ogayn taas oo ah fanzine, ha ka welwelin, daabacaadan waxaan kuugu sheegi doonaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato waxaanan sidoo kale ku tusi doonaa tusaalooyin kala duwan.
El fanzine, waa hab ka soo baxa in fikradaha ama fikradaha lala wadaago adduunka intiisa kale. Habkani waa habka tijaabinta hal-abuurka ee naqshadeeyayaasha.
1 Waa maxay macnaha fanzine?
2 Sidee loo sameeyaa fanzine?
Waa maxay macnaha fanzine?
Eraygaasi wuxuu ka yimid taageere y magazine. Badanaa waa daabacaad farshaxan sida primer, sida caadiga ah waxay u qaabaysan yihiin sidaas oo kale. Waxaa samayn kara xubin ka mid ah adduunka fanka, kaas oo mawduucyada fanka, dhaqamada, muusiga, iyo kuwa kale, lagaga hadlayo.
El Asalka daabacaadda noocaan ah waxay soo bilaabatay 30-meeyadii, markaasoo isweydaarsi qoraal ah oo dhex maray dadka jecel khayaalka sayniska.. Sanadihii la soo dhaafay iyo horumarka farsamada, tarankeedu waxa uu noqday mid aad u casrisan.
Waqti ka dib, Mawduucyada lagu falanqeeyay qoraalladan ayaa ahaa arrimo siyaasadeed iyo arrimo mudaharaad. Laga bilaabo 70-meeyadii, daboolayaashu waxay bilaabeen inay la soo baxaan dareen diidmo iyo fallaagonimo.
Horey u soo gaadhay 80-meeyadii, Boqortooyada Ingiriiska oo leh dhaqanka punk waa marka fanzine uu bilaabo inuu helo bilic shakhsiyeed. Tijaabadu waxay ku bilaabataa xarfo, qaabab kala duwan, midabyo, iyo waxyaabo kale oo nashqadaynta ah.
Fanzine-yada ku jira dhaqanka punk-ka ayaa ahaa kuwo aad u saamayn badan oo ay ku dhiirrigeliyeen fannaaniin badan oo wakhtigaas ah oo ay ka dhuuxeen waxyaabo garaafyo ah oo ka mid ah daabacadahan daboolka albamka.
ka Fanzine-yadii ugu horreeyay waxaa lagu sameeyay jariiradaha jarista, kuwaas oo la dhejiyay oo lagu dhejiyay warqad iyo qoraal ayaa lagu daray. Qoraalladan waxaa lagu qori karaa gacan-ku-qoris oo leh walxo kala duwan ama lagu dhisay meelo la gooyey. Haddii midab ama sawirro loo baahdo si la mid ah ayaa loo samayn karaa, gacan ama gooyn. Doorashooyinku waa kuwo aan xad lahayn marka ay timaado samaynta fanzine.
Maanta, daabacaadyadan guryaha lagu sameeyo ayaa si isku mid ah loo sameeyaa, xitaa waxay yeelan karaan qaabab kala duwan sida joornaal, buug yar, kaarka shakhsi ahaaneed, iwm. Ma aha oo kaliya inay ku kala duwan yihiin cabbirka, laakiin farsamooyinka sidoo kale way kala duwanaan karaan.
uu Qaybaha tifaftirka oo loo soo saaray qaab farshaxanimo iyo si madax bannaan, looguna talagalay dadka jecel mawduuca ama si loo shaaciyo fikradahaaga. Nashqado badan oo badan ayaa qaabkan isticmaalaya si ay shaqadooda u shaaciyaan.
uu walxo qiimo weyn u leh abuurashooda iyo akhristayaasha, maadaama ay kuwani yihiin daabacado leh wareeg xaddidan. Habka naqshadeynta iyo qaybinta oo dhan waxaa fuliya abuuraheeda.
Maalmahan, iyada oo horumarka tignoolajiyada ee aan ku hayno gudahayaga, ayaa Daabacaada daabacadahaan waxay leeyihiin tayo sare oo sidoo kale waxaa loo qaabayn karaa qaab dijital ah.
Sidee loo sameeyaa fanzine?
Haddii ka dib markaad ogaato waxa ay tahay, waxaad xiisaynaysaa inaad ogaato sida loo sameeyo mid aan dhib badan lahayn, markaa waxaanu ku siin doonaa gacan.
Sida aan sheegnay, a fanzine waxay la macaamili kartaa mawduucyo kala duwan, waxay mar hore noqon kartaa daabacaad ku saabsan fikradaha diimeed ama muujinta farshaxanka shakhsi ahaaneed.
Sida dhammaan naqshadaynta tifaftirka, marka hore waa inaad martaa hannaan cilmi baadhis ah, si aad hadhow ugu sii waddo habka hal-abuurka. Mid ka mid ah qodobbada ugu wanaagsan ee daabacadahan ayaa ah in aad samayn karto sidaad doonto, ma jiraan xeerar ama xad.
El Talaabada ugu horeysa ee aad qaadayso waa inaad qeexdo mawduuca aad ka hadli doonto. Waxyaabaha ugu wanaagsan ee ku saabsan daabacadahan ayaa ah inay kor u qaadaan xorriyadda hadalka, sidaas darteed mawduucna ma noqonayo mamnuuc.
Sida caadiga ah, qaabka noocan ahi wuxuu badanaa leeyahay siddeed bog, markaa waa inaad tan maskaxda ku haysaa Abuur nuxur gaaban oo kooban.
Marka aad qeexdo mowduuca laga hadlayo, waa waqtigii bilow wajiga waraaqaha. Marxaladdan waxaad qori doontaa, sawiri doontaa, gooyn doontaa, iwm. Waa inaad faahfaahisaa oo aad habaysaa nuxurka daabacaada.
Inta badan ee aad haysato, way sahlanaan doontaa inaad doorato midka saxda ah. Way fiican tahay inaad haysato wax ka badan inta loo baahan yahay, markaa waxaad dalban doontaa wax badan oo naftaada ah marka ay timaado inaad u hesho waxa ugu fiican shaqadaada.
Tallaabada xigta waa inaad raacdaa samee liis ay ku jiraan dhammaan waxyaabaha aad rabto inaad kaga hadasho fanzine. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad ogaato macluumaadka ka muhiimsan kuwa kale.
Qoraalkani wuxuu kaloo caawiyaa in fikradaha loo habeeyo si gaar ah. Taasi waa, maxaad ka hadli doontaa ka hor iyo ka dib.
Markaan hore u haysano mawduuca, maadada iyo qoraalka, waa waqtigii la go'aamin lahaa qaabka Maxay yeelan doontaa boostadaada? Waa la laalaabi karaa oo la xarri karaa sida joornaalka ama, dhanka kale, waa la laalaabi karaa oo keliya sida ay tahay laalaabka. Waxaad haysataa fursado badan.
Tan ka sokow, waa in aad go'aan ka gaartaa tallaabooyinka aad ku shaqaynayso. Haddii, tusaale ahaan, aad isticmaasho cabbirada caadiga ah wakhtiga daabacaadda, way ka jaban tahay haddii aad ku sameyso tallaabooyin aan caadi ahayn.
Sidaan horey u soo sheegnay, fanziinadu waxay inta badan ka kooban yihiin 8 bog, laakiin waxay ku xiran tahay inta alaabta aad ku shaqeyso, waxaad u baahan doontaa wax ka badan ama ka yar.
Sida dhacdadii sheeko-sheekadu, waxa aad u baahantahay in aad dulmar ka samayso tirada boggaga aad ku shaqaynayso oo aad ku tilmaanto mid walba waxa macluumaadka ama curiyayaasha ku jira.
Marka aad haysato wax kasta oo habaysan, tallaabada ugu dambeysa ee ay tahay inaad sameyso ka hor inta aadan bilaabin naqshadeynta waa doorashada warqada aad la shaqaynayso.
Hadda waxaad haysataa oo kaliya wajiga naqshadeynta, waa doorashadaada haddii aad rabto inaad ku sameyso qaabkii hore oo leh gooyo iyo sawirro gacanta ama liddi ku ah waxaad u naqshadeyn doontaa si dijital ah.
Samaynta zines waa hannaan naqshadayn gaar ah kaas oo lagu horumarinayo hal-abuurkaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Waa maxay iyo sida loo sameeyo fanzine
Istuudiyo naqshadeynta Isbaanishka oo aad jeclaan lahayd inaad ka shaqeyso